PhoneGap: Yambuka-Platform Yenhare Kunyorera Kuvandudza | Martech Zone
PhoneGap: Yambuka-Platform Yenhare Kunyorera Kuvandudza
Muvhuro, Nyamavhuvhu 3, 2009 Mugovera, October 20, 2018 Douglas Karr
Kana iwe uine chero ruzivo rwekuvandudza mumitauro yakawanda, kunze kwechinangwa C, iwe unozowana zvakafanana maitiro akaitwa nemurume uyu:
Ndakatenga bhuku ndikariverenga, ndakatarisa mafirimu, ndikaisa iyo HERE uye ini handikwanisi kunyengedza nzira yangu kupinda muapp inongoti, "Mhoro Nyika!".
Ndatenda runako kuti kune vamwe vasinganzwisisike vanogadzira kunze uko vanoziva izvi uye vauya nemhinduro huru Sezvo vazhinji vavandudzi vari kugadzirira webhu mazuva ano, rimwe boka rine tarenda rakauya nemhinduro inoshamisa, PhoneGap.
Thanks kune Stephen Coley yezano!
Imwe Google Akaundi Akaundi, Akawanda Domains
Webtrends 9 Kununurwa: Zvinopfuura Zvese Zvinotarisirwa
Aug 14, 2009 na4: 09 PM
Appcelerator iri kupawo isiri-Chinangwa-C nzira yekuvandudza pane iyo iPhone. http://www.appcelerator.com/
Aug 20, 2009 pa 11: 26 AM
kupora, ichi chinotaridzika sechinhu chinonakidza chekuongorora, ini ndinowedzera ichi kune yangu nhare yekushandisa yekuvandudza kugona